म्यासाच्यूसेट्स राज्यको बोस्टनमा संचालन हुने घुम्ती कन्सुलर सेवा शिविर सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना – Embassy of Nepal, Washington DC, USA
Posted on September 10, 2021 September 25, 2021
नेपाली राजदूतावास, वाशिङ्गटन, डि.सी. ले म्यासाच्यूसेट्स राज्यको बोस्टन शहरस्थित देहायको स्थान, मिति र समयमा न्यु इंग्ल्याण्ड (म्यासाच्यूसेट्स, न्यु ह्याम्सायर, रोड आइल्याण्ड, भर्मोन्ट, मेन, कनेक्टिकट) क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली समुदायलाई लक्षित गरी घुम्ती कन्सुलर सेवा शिविरमार्फत कन्सुलर सेवा प्रदान गर्ने कार्यक्रम तय भएकाले उक्त स्थान, मिति र समयमा सेवा प्राप्त गर्न राजदूतावास सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछ।
स्थानः Columbus Club of Arlington
15 Winslow Street, Arlington, MA 02474
मितिः सेप्टेम्बर २५-२६, २०२१
पहिलो दिन: बिहान ९:३० बजेदेखि साँझको ४:३० बजेसम्म
दोस्रो दिन: बिहान ९:०० बजेदेखि साँझको ३:०० बजेसम्म
क) राहदानी नविकरण (अगष्ट २०२२ सम्म बहाल अवधि रहेकाहरुले नविकरण गर्न सक्ने)
च) पर्यटक भिषा (Tourist Visa)
कोभिड-19 का कारण स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता अपनाई सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने भएकाले आफूलाई चाहिएको सेवाका सम्बन्धमा https://us.nepalembassy.gov.np/consular-camp-boston-appointment-form link मा गई अग्रिम रुपमा आफ्नो नाम, सम्पर्क नम्बर र प्राप्त गर्न चाहेको सेवाबारे फाराम भर्नु हुन अनुरोध छ। राजदूतावासले सम्बन्धित सेवाग्राहीलाई समय तोकी सोही अवधिमा मात्र उपस्थित हुन अनुरोध गर्दै इमेलमार्फत् जानकारी गराउनेछ।
क) राहदानी नविकरण
नेपाली राजदूतावासको नाम (“Embassy of Nepal, Washington, DC”) मा जारी भएको अ.ड. १५० को मनी अर्डर (हराएको र बिग्रिएको राहदानीको हकमा दोब्बर दस्तुर अर्थात् अ.ड. ३००)। तर, १० बर्ष भन्दा मुनिका नाबालकको हकमा नवीकरण अ.ड. ७५ र हराएको/बिग्रिएको हकमा अ.ड. १५०) ।
ख) गैर आवासीय नेपाली परिचयपत्र
नेपाली राजदूतावासको नाममा जारी भएको अ.ड. ५२० को मनी अर्डर।
ग) अधिकृत वारेसनामा
नेपाली राजदूतावासको नाममा जारी भएको अ.ड. २०० को मनी अर्डर।
घ) कागजात प्रमाणिकरण
नेपाली राजदूतावासको नाममा जारी भएको अ.ड. ५० को मनी अर्डर।
ङ) एकतर्फी यात्रा अनुमतिपत्र
नेपाली राजदूतावासको नाममा जारी भएको अ.ड. ४० को मनी अर्डर।
च) पर्यटक भिषा
नेपाली राजदूतावासको नाममा जारी भएको मनी अर्डर (१५ दिने भिषाका लागि अ.ड. ३०, ३० दिने भिषाका लागि अ.ड. ५० र ९० दिने भिषाका लागि अ.ड. १२५)।